Kamaraatka: olole wanaagsan oo loo sameeyo qaybta kookaha - JeuneAfrique.com - KU SAMEEYAAN JOOJI
ACCUEIL » DHAQAALAHA »Cameroon: waa olole wanaagsan oo loogu talagalay waaxda kookaha - JeuneAfrique.com
Kameroon: waa olole wanaagsan oo loogu talagalay waaxda kookaha - JeuneAfrique.com
Dhamaadka XilliX / 2018 kookaha, kaas oo la soo gabagabeeyey July 2019, Cameroon waxay aragtay dhoofinta dhoofinta ay ugu kordhayaan 15%. Jaantusyada ayaa sidoo kale horseeday hawlo sii kordhaya oo ay soo saareyaasha kookaha afaraad ee ugu weyn adduunka ay rabaan inay sii xoojiso.
Munaasabadda lagu soo bandhigayay ololaha qumbaha ee loo yaqaan '2019 / 2020 cocoa' ee deegaanka Sangmelima, in kabadan 100 km koonfur-galbeed ee Yaoundé, Xafiiska Qaranka ee Cocoa iyo Kafee wuxuu bixiyay qiimeyn aad u wanaagsan oo ku saabsan ololihii la dhameystiray, kaas oo ku biiriyay 11% dhoofinta dalka ee 2018. Kordhiyay 4,2% xilli ciyaareedkii hore, soosaarka kookaha suuq lagu iibiyo wuxuu ahaa 264 253 tan.
Kordhinta faa'iidooyinka ayaa ka sarreysa dhammaan ka soo boodista 25,6% ee dhoofinta, illaa tan 214 825 tan, ka dib hoos u dhac ku yimid 13,3% intii lagu jiray ololaha 2017 / 2018. Hoos udhacani wuxuu u sabab ahaa qalalaasaha amniga ee saameynayay sedexdii sano ee la soo dhaafay gobollada Anglophone ee Koonfur-galbeed - oo muddo fog lagu tixgelinayay salka wax soo saarka ugu horreeya ee waddanka - iyo Waqooyi Galbeed. Dekedaha Amsterdam iyo Jakarta waxay heleen 74,41% digirta Cameroon.
Heerka sare u kaca ee wax soo saarka ganacsiga ayaa runtii horseeday hoos u dhac ku yimid kaydka dhamaadka sanadka. Kuwani waxay hadda ku jiraan 18 035 tan, halka ay gaareen heer taariikhi ah oo ah tan tan ee "27 159 ton" dhamaadka ololihii hore.
Iyada oo ahmiyad weyn u leh dhaqaalaha dalka maxaa yeelay waxay soo saartaa sarrifka lacagaha qalaad, howlaha wax lagu karsado ee kookaha waxaa dhiirrigeliyay tallaabooyinka canshuuraha ee 2017, taasoo horseeday maalgashiyo waaweyn oo ay sameeyeen shirkadaha. Ka dib markii ay ka boodeen 61% intii lagu jiray ololihii 2017 / 2018, xaddiga kookaha ay maamusho ayaa kordhay 9,6% xilli ciyaareedkii la soo dhaafay ilaa tan 58 522. Isbeddellada ayaa si gaar ah u horseeday kororka awoodda wadajiyeyaasha Barry Callebaut, Ferrero iyo Tiger Brands, iyada oo loo sii marayo kaabayaashooda maxalliga ah.
Heerka waxqabadka ayaa la rajaynayaa inuu kordho inta lagu jiro xilliga soo socda, iyadoo gelitaanka hawlihii Abriil ee la soo dhaafay uu ahaa Neo Industry, kaas oo damacsan inuu ku hawlgalo 26 000 tan sanadkiiba. Sidoo kale, waaxda cusub ee kooxda Shirkadda Isboortiga ee loo yaqaan 'Atlantic Cocoa Corporation' waxay bixisaa daweyn sanadle ah oo tan oo ah tan '48 000 tons'.
Soosaaraha afaraad ee afaraad ee adduunka ugu weyn, Cameroon ayaa hadda leh in ka badan 600 000 beeraleyda ah kookaha kaasoo ka faa'iideystay xilligan xilli qiimo leh. Qiimaha ugu badan ee iibiyayaashu waxay ahaayeen 1270 F CFA / kg iyo qiimaha ugu yar ee 650 F CFA / kg marka loo eego 1210 F CFA iyo 550 F CFA siday u kala horreeyaan intii lagu jiray ololaha 2017 / 2018.
Gabon: Sogatra waxa ay isku dayeysaa in ay bannaanka ka baxdo kahor imaatinka Trans-Urb - JeuneAfrique.com
Ruushka: aargudashada "dwarf" qaaradda Afrika? - YoungAfrica.com